Taariikhda My Butros » Iska ilaali Liars
Last updated: Jan. 19 2020 | 5 min akhri
Markii aan ugu horeysay bilaabay shukaansi Internet, Waxaan ahaa agaasimaha suuqgeynta mid ka mid ah Milwaukee ee shirkadaha ugu waaweyn dhismaha, Waxaan u tegey dugsiga waqti-buuxa ah, oo waxaa la I ka shaqeeya soo bandhiga buug gabayada. Oo weliba, Waxaan la yaabay, sababta uusan aan la kulmay qofka xaq weli? Marna igu soo dhacday in aan waalan, jadwalka frenetic suurto gal noqon kartaa sababta.
Waxaan soo dhawaaday shukaansi Internet sida mashruuca shaqo kale. Markiiba waxaanu email iyo kulan guys cusub oo ku salaysan aad u soo noqnoqda. Dabcan, Waxaan mar walba iyagii la kulmay meel ku haboon oo deg deg ah, dukaan kafeega ah sida meel aan jeclaa. Waxaan arbushin laga yaabaa in, sheekeysto saacad (kuwaas oo had iyo jeer wuxuu ii ahaa xeerka shakhsi) oo markaas wuxuu noqon on my sida. Waxa ay ahayd oo keliya shir kale aan maskax hubiyaa off my Liiska mar walba sii koraya ee loo qabto ee.
Waxuuna, Wiilkaan marmar goolkooda lahaa sababtoo ah waxaan ku khasbannahay in aan ballan kale taariikhaha noo… oo kaltan… oo markaas mararka qaarkood, cancel. Laakiin Hey, Waxaan is tusay, Haddii uu ku fahmi karo in aan ahay mashquul gabar la nolosha ah aniga ii gaar ah markaas isagu kuma uu jirin oo uu cusbo ku kacaya. Right?
Ma ahayn ilaa aan la kulmay nin ka mid via email, oo ahaa wax yar ka weyn igu badan, carruur iyo ganacsi ayuu booday oo dhawaan la ballaariyey. Waxa uu ka dhawaajiyeen smart oo xiiso leh iyo I xiiso by emails uu. Ugu dambeyntii maalinta yimid marka waxaan ku heshiinney in ay la kulmaan. Waxaan jadwalka taariikhda on my taariikheed ee todobaadka soo socda, laakiin sida taariikhda soo dhawaaday waxaan ogaaday jirin hab aan noqon lahaa awoodna u leh waqtiga iyo isaga loo yaqaan si aad u joojiso. Wuxuu ahaa nimco miidhan, oo waxaan sii waday in ay ku hadlaan telefonka, mar kasta oo aan ahaa walaacsan in isaga hesho off line sababtoo ah waxaan is tusay waxaan lahaa waqti si aad u hesho in la ogaado isaga mar aan kula kulmay. Waxaan jadwalka taariikhda kale oo igu kaliftay inaan joojiyo in uu ahaa sidoo iyo soo jeedinta ah daqiiqadii ugu danbeysay ee uu soo dhisay dabamariyay ee aan xushmad miiska of my Tababaraha awoodin-to-fadlan.
Waan hubaa inaan dhaho waan sheegin xilliga taariikhda saddex jeer aannu ka badan xishoon. Markaas ugu dambeyntii, todobaad ugu dambeyntii laba ka dib waxaan la kulmay ka hor Christmas. Waxaan soo qaatay maalinta shaqada fasax laakiin waxaa aad ugu socotaan 'haleesho’ on waraaqaha daqiiqadii ugu dambeysay. Waxaan ku heshiinney in aan isaga ka hor tago, waayo, koobka degdeg ah oo bunka on my sida in.
Waxa uu ahaa nin bilicsan oo funny oo markiiba Waan jeclaaday. Markaasuu wuxuu ku yidhi wax iga dhigtay in ay joojiyaan in kuwan raadkaygay, irbadda la qaylyina Akhriskaaga screeching off soundtrack ee noloshayda mashquul.
Waxaan mar sameeyey saxiixa buug at Barnes iyo Noble oo waxaa ku salaami doona furitaanka ka qof dumar ah oo fiftiesh redheaded. “Maxay waa la raggii oo dhan oo online ah been?”. Waxaa jiray qosol qaar ka mid ah, iyo qaar ka mid ah sacba sidoo. Waxaan at dhan dhar uma uu la yaabay su'aasha, sababtoo ah haddii aan ahaa in ay ka hadlaan in qol ka mid ah rag shan iyo labaatan, ay shaki ka codsan lahaa isla su'aasha ku saabsan haweenka.
My jawaab dhay xaaladahan waa inay isku dayaan inay damqadaan iyaga umbaa Beenaalayaala aan u dulqaadanaynin dhaqankooda. Bal aan qabaa: Maxay dadka jiifsan? 1) Maxaa yeelay, iyagu tahay nabadgelyadiisu 2) Waayo waxay og yihiin in haddii ay run sheeg, xitaa iyagu ma ay heli doonaan taariikhda. Laablaab, xaq u? Waayo, ma dumarka ka maqlayo this. Dhab ahaantii, ma ahan oo keliya ma ay burush ee is barbar been lab (xun) si been dumar ah (ma si xun), laakiin way ku sii adkeeyeen in ay Galti nin si aad u codsato da'da run qof dumar ah ee.
Dhageyso. Ma joojin karo been ah, lakiin waxaan rajeynayaa in ay joojiyaan labawejiilenimada. Liars cambaareeyey beenaalayaal iyo gaar ahaan marka ay jawaan ii at dhinacyada is biirsaday oo si gaar ah daal.
Bal aan u tuuraan ah arrimaha caadiga ah dhowr iyo isku dayo in la fahmo sababta been iyadaa Beenalaay ah.
Haddii aad tahay 5'5 nin iyo 80% haweenka gaaban oo aan xitaa tegi doonaa iyadoo baxay, aad idinku tahay 5'8′ iyo rajeynayaa in aad jiidashada ka adkaado been ah. Kuma, laakiin waxa aad u rajeynayaa in ay qabato.
Haddii aad tahay 175 Haweeney LB, aad naftaada wici kartaa 'adag oo Doonyihii'. Haa, 'Pounds dheeraad ah dhowr ah’ ama xataa 'waaweyn’ xoogaa badan oo sax noqon lahaa, laakiin aad ku dhegi qeexida sababta oo ah guys ugu aan jawaabi doonaa runta. Marka aad la kulanto, aad isku daydo inaad iska indha sugaya niyad uu ku siinayaa, sababtoo ah aad ugu yaraan in aad shot cadaalad ah, xaq u?
Oo bal yaa eedayn karaa dhallinyaro ah-ee-heart 61 sano ama oday ama dhallinyaro ah a 44 Haweeney jir ah u tweaking runta tad ah? Iyagu way og yihiin sababo la xiriira duruufaha ka baxsan ay gacanta ku hayaan, ay tahay off badan oo labada naadi ee dadka. Sidaas daraaddeed way yar iyo wax badan ama dalqada – si ay u sii muuqda in daters online kale halkaas. Ma dhahayo waa xaq. Waxaan kaliya oo sheegay in ay ka dhacdo.
By nooca aad u of dhexdhexaad iyo dad hal dhiganta by computer ka hor shirka iyo boqolkiiba hufan oo iyaga ka mid ma noqon doono si buuxda u socda. Waa macno. Maxaa boqolkiiba oo naga mid ah ayaa kalsoonidarro? Maxaa boqolkiiba oo naga mid ah ay ku guuldareysato inay la kulmaan shuruudaha kale’ Liisas maskaxda? Maxaa boqolkiiba oo naga mid ah waa smart ku filan in la ogaado in daacad ah 63 Haweeney u cayilan jir sanadkan ma kulmi liis hubineed ee ugu ragga, taas oo ah sababta dhabta ah ayay ka lix sano iyo soddon pounds dhejisaa sawirka in ka hor?
My dhibic ma aha in aan soo dhaweynaa Beenaalayaasha ah in nooc ka mid ah hab group, ama uga mahad noo hayo on our suulasha. Halkii, waa in aan isku dayo in la fahmo iyo aqbasho xaqiiqada ah in dhaqanka sidaas waxaa hubtaa sida Ozzy ee qeybiso inkaar u dhacayaan iyo, ama J.Lo ee qeybiso isfura. In aad xanaaqdo waxba xaliiyaan oo dhan ay qabato waa ka dhigi inaad khadhaadh iyo kuwa aan buuxin, laba nisbayn in aan weligood qaadan qof meel kasta.
Laakiin tan iyo markii aan ma joojin karaan Beenaalayaal, waxa halkan ku tallaabooyin taxaddar ah oo yar oo aad qaadi karto in isku day sidii aad uga hortagto:
1) Weydiiso sawiro dheeraad ah oo ku. Ma aqaan inta jeer ee aan qabo in ay arkaan darbo madaxa u eg Natalie Portman, oo kaliya in la ogaado inay iyada Natalie u safto nolosha dhabta ah, laakiin waxaan bartay aan cashar. Haddii aan u soo diri karo sawirada dheeraadka ah ee iga qaaday sannadkii la soo dhaafay, markaas ma jirto wax cudurdaar ah qof kale in aan sidoo haysato.
2) Tixgeli tayada Sawiradii. Film iyo dhar u muuqataa duwan yahay waxaa sameeyey toban sano ka hor. Tiilmaamaya kala duwan, faashiyoonadi kala duwan, palette midab oo kala duwan. Haddii sawir muuqda taariikhaysan, qofka aad u wanaagsan waxaa laga yaabaa in wax qarinaysid.
3) Ka fikir curinta waxay sawiradoodii. Dhab ahaantii xirto sawir iyo lahayn sawiro kale oo taageeraya? Qof aan ku faraxsan yahay isaga / iyada jirka. Keliya laabta ilaa aragto qof? Wax la mid ah. Xirashada madow dhan, aasay ka danbeeya saaxiibada, ama masaadjidka by fern ballaaran? Qofkaas waxa loo qarinaya, iyadoo sabab wanaagsan.
4) Macquul ahna fikir. Mana dooneyno in ay ku adkaysato jirka ah, ama aad ku profile ama telefoonka, laakiin haddii ay jiraan wax uusan ku darto aan ilaa, ku qoro waxaa ka mid ah. Nin A oo qudhiisa ayaa ugu yeedhay 'dooxay’ laakiin ma wax isboortiga samayn aan aad runta u sheegaan. Isla naagtii la oo sheegtay iyada 39 laakiin waxa uu leeyahay laba grandkids.
Haddaba waan tegi doonaa diiwaanka iyo waxa ay sheegayaan in ay caadi tahay in uu qof kale la jiifsado oo ku saabsan isaga / iyada da'da KALIYA haddii qofka uu garwaaqsan yahay runta dambe ee astaanta. Been ka sameysato muuqan in shuruudaha si sharci darro cidhiidhi raadinta dadka ee waa qaylo ka fog been la soconina khiyaanayn.
Helitaanka waalan ee beenaalayaal sidoo kale waa d'classe. Waxaan la hadlay oo laba laba ah guys ahaa oo u xanaaqsanahay la been u sheegay in ay u dhaqmeen si embarrassingly. Mid ka mid ah u sheegay off qof dumar ah oo u xiiray ayuu saddex sano off iyada da. Kale ayaa jeesatay oo waxay naagtii ku kuwaas oo aan ku noolaan ilaa sawirkeeda BIDIX. Aniga, tani waa laba Samreen wixii ku guuldareystay inuu xaq u. Beenalaay ah xiri ilaa, iyo bixin doonaa, maxaa yeelay, iyadu ma ay heli doonaan taariikhda labaad, laakiin taasi ma jirto sabab iyada Nabar ee nolosha.
Haddii qof u ku khiyaaneeyo leh sawir, noqon fal class oo aan kaliya nimco miidhan ah, laakiin adiga oo aan naftaada been. By run sheegaysaan, aad samaysay oo dhan in qof suurto gal ah samayn kartaa in aad ku nadiifisid goobta shukaansiga online oo dhan.
Farm Liiska Bedlam ee mustaqbalka Dog Milkiilayaasha